Izindaba - White Cross-exhumene Polyethylene Foam Gaskets
I-polyethylene foam ehlanganisiwe yeseli evaliwe ingahlala ingenye yezinto ezinhle kakhulu ze-foam gasket. Igwebu le-polyethylene linezigaba ezimbili eziyinhloko - i-polyethylene foam exhumene namakhemikhali ne-polyethylene foam exhunywe ngemisebe. Okokugcina kusebenza kangcono futhi kusetshenziswa kaningi njenge-foam gasket yezimakethe kufaka phakathi ezokwelapha, amadivayisi kagesi, ukupakisha kwezimonyo, izinto zezimoto, njll.
I-irradiation i-polyethylene foam gasket exhumene nemisebe isebenza kahle ezintweni ezibonakalayo. Kuvaliwe iseli elixhumene ne-polyethylene foam material
Indawo ebushelelezi enendawo yokuqedela enobungane
Ukumelana kokuqala nomswakama, isimo sezulu kanye namafutha
Ukufakwa okuhle kakhulu kokushisa nokushisa
Ukusebenza kahle kokunweba
Kutholakala ngobuningi obukhulu bemibala kanye nemibala
Isakhiwo seseli esivaliwe sokumunca amanzi okuphansi nokudluliswa komphunga.
Izinto zokukhanya ze-irradiation ezixhumene ne-polyethylene foam gasket zinokunye ukuguquguquka. Ububanzi bobukhulu buyatholakala kusuka ku-0.08 mm kuye ku-8 mm. Okunye ukushuba kungenziwa inkambiso eyenziwe ngenqubo yokugaya amagwebu. Futhi ukuminyana kungaba kusuka ku-28 kg / m³ kuye ku-300 kg / m³. Imibala ejwayelekile ye-foam imhlophe futhi imnyama. Eminye imibala ingenziwa ngezifiso kufaka phakathi okuluhlaza okwesibhakabhaka, okuluhlaza okotshani, okubomvu, okusawolintshi njalonjalo.
Ikesi Lekhasimende - Isicelo Somkhiqizo Wogwebu
Nansi impahla yamagesi ye-polyethylene foam exhumene nemisebe esiyikhiqizele imakethe yethu yasekhaya
ikhasimende. Bazosebenzisa le nto ye-PE foam gasket njenge-cushion joint yezingxenye zabo zezimoto. I-polyethylene foam gasket yethu exhunywe esiphambanweni isebenza njengengxenye yokuthwebula futhi nokumelana nophethiloli nophethiloli. Ngenxa yekhono labo lokunweba, basebenza kahle lapho izingxenye zezimoto zisebenza.
Senza Kanjani Leli Gasket Lamagwebu
Okokusebenza kwaleli gasket le-foam yi-irradiation i-polyethylene foam exhumene ne-foam enesilinganiso sokunwetshwa kwe-foam sezikhathi eziyi-15 no-65 kg / m³ wesisindo. Usayizi we-gasket ngu-130 mm x 98 mm x 1 mm ngokusika okwenziwe ngokwezifiso.
1) kuvaliwe iseli le-polyethylene foam gasket materialKuqala sidinga ukuqinisekisa nekhasimende emikhiqizweni ye-CAD yomkhiqizo. Imidwebo ye-CAD yomkhiqizo kungcono inikezwe onjiniyela abavela kumakhasimende. Ngakolunye uhlangothi, uma ikhasimende lingenakho ukwesekwa kokuklanywa kwe-CAD, singayenza leyo ngxenye yomklamo wobunjiniyela womkhiqizo wamakhasimende.
2) Ngemuva kokuqinisekisa umdwebo we-CAD we-foam gasket, sizokwenza insimbi isike isikhunta sokusika ngokuya ngemidwebo eqinisekisiwe. Uma die ukusika isikhunta ngomumo, abasebenzi bethu ifektri uyohlela ukukhiqizwa ngobuningi.
3) Ngokuqondene nokuqanjwa kwangempela kwale nto ye-foam gasket, sidinga ukufeza inqubo engezansi yokukhiqiza:
Ukwehliswa kwe-foam ngokwezifiso
I-polyethylene foam yokuqala ingolunye uhlobo lwezinto ze-foam ezenziwe nge-foam. Ziza ngokugoqeka hhayi eshidini, abasebenzi bethu basefektri bazodinga ukusebenzisa imishini yethu yokuma saw mpo ukusika emashidini. Lawa mashidi e-polyethylene foam asikiwe kufanele okungenani abe nosayizi ofanayo wesikhunta sokusika sensimbi noma esikhudlwana.
Lungisa umsiki wokufa bese ufaka isikhunta sokusika ukuze ukwenze ukusika ngokunemba
Ngaphambi kokukhiqizwa kwangempela, onjiniyela bethu bokukhiqiza kumele bavale ngokucophelela iseli evaliwe yeseli polyethylene foam gasketsinstall the die cut mold and make it well compatingly with die cutting imishini. Le nqubo yokuhlola isikhunta ithatha isikhathi esilahlekile kunekhasimende elivame ukucabanga. Ngokuqondene nomphumela oqondile wokusika, sizosebenzisa ingxenye ethile yento eyenziwe nge-foam ukuqinisekisa ukuthi isikhunta sensimbi sifakwe kahle. Ngemuva kwalokhu, ukukhiqizwa kwesisindo kungavunyelwa ukuthi kuhambe.
4) Ingxenye yokugcina okudingeka siyenze ukupakisha ngokwezifiso kwemikhiqizo ye-foam eseqedile ngaphambi kokuthunyelwa. Sizopakisha i-foam gasket yangokwezifiso yokuhamba okungcono. Ukupakisha okwenziwe ngokwezifiso njengebhokisi lephepha lokuphrinta nezikhwama eziningi kutholakala kithi ngokuya ngezidingo zamakhasimende.
Ngale phrojekthi ye-Polyethylene foam gaskets engezansi iyadingeka